प्रहरीको दादागिरी: औषधि किनेर फर्किएका बिरामीलाई प्रहरीको निर्मम लाठी प्रहार सहि कि गलत …. (भिडियो सहित) «
प्रहरीको दादागिरी: औषधि किनेर फर्किएका बिरामीलाई प्रहरीको निर्मम लाठी प्रहार सहि कि गलत …. (भिडियो सहित)
Published : 17 April, 2020 7:22 pm
कोरोना भाइरस रोग संक्रमण नियन्त्रणका लागि २४ दिनदेखि देश लकडाउनमा छ । लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक कोही पनि बाहिर निस्कन पाइँदैन । औषधि उपचार तथा अत्यावश्यक सेवाका लागि भने अनुमतिमा निस्कन पाइन्छ । तर आज कलंकीमा प्रहरीद्वारा बिरामी तथा औषधि किन्न गएका माथि निर्मम तरिकाले लाठी प्रहार भयो । हिजो शिक्षण अस्पतालका तीन डाक्टर माथि लाठी प्रहार भएको घटना सेलाउन नपाउँदै प्रहरीद्वारा आज अर्काे ज्यादती भयो ।
म रिपोर्टिङका लागि चक्रपथ परिक्रमा गर्ने क्रममा आज साँझ करिव ५ बजेतिर कलंकीमा जे देखेँ त्यो अति नै निकृष्ठ थियो । प्रहरीले सडकमा एकै परिवारका तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उहाँहरुको हातमा औषधिको झोला थियो । म नजिक जान खोजे तर मलाई प्रहरीले रोक्यो मेरो क्यामरा जफत गर्छाै भनी धम्की पनि दिए । नियन्त्रणमा रहेकाहरुले भनिरहनु भएको थियो हामी औषधि किन्न आएका हौं, हामी बील देखाउँछौ तर प्रहरीले कुरै नसुनी एकाएक लाठी प्रहार गर्यो । उहाँहरु मेडिकल पसलबाट निस्किएको देख्दादेख्दै सडकमा पाइला राख्न नपाउँदै नियन्त्रणमा लिई प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा भएको यो ज्यादती खेदजनक छ ।
मलाई नजिक जान नदिएकाले गर्दा मैले पीडितको विवरण लिन सकिन । मैले यस विषयमा तत्कालै महानगरिय प्रहरी प्रभाग कालिमाटीका प्रमुखलाई जानकारी गराएँ । उहाँले यस विषयमा छानविन गर्ने बताउनुभएको छ । महिलालाई पुरुष प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर निर्मम व्यवहार गर्यो जुन निन्दनीय छ । केही प्रहरीको यस्तै व्यवहारले प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गरिरहेको छ । हेल्थपाटी डटकम यस घटनाको तत्कालै छानबिन गरि घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कडा कार्वाहीको माग गर्दछ । सम्पादन नगरिएको दृश्य ।